Sisim-bava manaintaina eo amin’ny ankizikely : aleo manatona dokotera.
« Pèrlèche », io no anarana omena ilay ratra, na fanaintainana amin’ny sisin’ny vava miseho amin’ny ankizikely. Maro ny antony mahatonga azy io.
Fomba fisakafo mahasoa, ho an’ireo marary voa
Nandala ny resaka fitsaboana nentim-paharazana ny Ntaolo.
Lokom-bolo, “extension”: mampiongo-bolo raha…
Toe-javatra mety hiseho amin’ny vehivavy, amin’ny ankapobeny, ny fihintsanan’ny volo. Inona no mety mahatonga azy io?
TANORA MALAGASY TE HANANGANA ORINASA Maro be, saingy mila tohana hoy ireo CEERE
Maro ny dingana tsy maintsy arahina mba hahafahan’ny tanora miditra ao anatin’ny fananganana orinasa hoy ny fanazavan’ny CEERE na ny Club Entrepreneures Etudiants du Rendez-vous des Entrepreneurs.
Te hihinana sakafo iray : inona no antony ? Ara-dalàna ve?
Asa raha misy amintsika no mahatsapa izany, fa mety hiseho amin’ny vatana ny hoe te hihinana sakafo iray anakiray, ary matetika.
CHU MAHAVOKY SUD Nahazo fameloman'aina vaovao
Na dia efa mihena isan’andro aza ireo tratran’ny valan’aretina Covid-19 eto amintsika dia mitohy hatrany ny fampitaovan'ireo malala-tanana.
Mila mitandrina be amin’ny resaka fahadiovana sy fidiovana amin’ny faritry ny fivaviana ny vehivavy bevohoka.
Mety hampihena ny hery fiarovan’ny vatana ny areti-nify, indrindra moa raha tena lasa lavitra izany.
Ho an’ireo fitsaboana nentim-paharazana dia ny ravina manga na ravin-goavy no nentin’izy ireo ho vahaolana amin’io areti-nify io.
· Ravina manga miloko mavo
· Rano 1 litatra
Sasana tsara ny ravina manga. Raha efa izay dia hatao anaty vilany ary hampangotrahana miaraka amin’ny rano 1 litatra mandritra ny 15 minitra na 30 minitra eo ho eo. Andrasana hangatsiaka ary hanontsanana ny ati-vava, maraina vao mifoha sy hariva, mialohan’ny hatoriana. 2 herinandro eo ho eo no hanatanterahana azy.
· Ravin-goavy singany 5
Sasana tsara ny ravin-goavy. Arotsaka anaty vilany miaraka amin’ilay rano 1 litatra. Hampangotrahana 15 na 30 minitra eo ho eo. Rehefa mangatsiaka dia hanontsanana ny ati-vava sy ny nify marary. Tsara raha tanterahana 2 herinandro eo ho eo ity torohevitra ity.
Raha toa ka nify goaka ilay mahazo, dia ny fanesorana azy any amin’ny mpitsabo ihany no vahaolana, raha tena tsy zaka intsony ny fanaintainana. Tsy mety sitrana intsony mantsy ny nify goaka ary harary foana raha sendra tafiditry ny sakafo, na vizana ny vatana, na midina ny hery fiarovana, na voadona sns.